WARIYE DARWIISH OO SAAKA LAGU RIDAY XUKUN AAN LOO OGOLAAN QAREEN U DOODA IYO MAYERKA OO WATAY QAREEN | Toggaherer's Weblog
GUDDIDA DHEXDHEXAADINTA KHILAAFAADKA SIYAASIGA WAR-SAXAFADEED
WARIYE DARWIISH OO SAAKA LAGU RIDAY XUKUN AAN LOO OGOLAAN QAREEN U DOODA IYO MAYERKA OO WATAY QAREEN
Ceerigaabo 25 April 2009 THN
Waxa saaka subaxdii hore xukun xaqdaro ah lagu riday wariyihii shabakadda Qarannews uga soo warami jirey gobolka Sanaag weriye Cabdilaahi Xasan Darwiish,oo lagu riday xukun hal sano oo xadhig ah, 6-bilood oo laga mamnuucay inuu mihnaddiisa weriyenimo ku shaqeysto iyo ganaax dhan 400,000SL.
Weriye Darwiish oo amarka xadhigiisa uu bixiyey maayarka magaaladaasi md.Ismaaciil Xaaji Nuur ayaa in mudo ahba ku jirey xabsiga magaaladaasi iyadoon la xukumin.
Baaqyo iyo eedeymo ka kala yimid xukuumadda dhexe, daladda midowga saxaafadda S/land ‘USJ’ iyo cuqaal iyo waxgarad badan kadib ayaa maayarku dedejiyey in xukunka si degdeg ah loo rido, maadaama oo sharciga ay kasoo horjeedo in 7 caso wax ka badan muwaadin lagu hayo xabsi, iyadoon la xukumin.
Weriye Darwiish oo aan wax qareen ahi difaaceyn ayaa saaka maxkamadda gobolka lasoo taagay,maadaama qareenadii gobolku ay ka wada biyo diideen inay dacwadda uu maayarku ku oogayo weriyaha ay jebiyaan oo weriyaha difaacaan arimo amnigooda mustaqbalka la xidhiidha awgeed.
Si kastaba ha ahaatee xukunkaas ayaa ugu hadal hayn badan maanta magaalada Ceerigaabo,kaas oo dadka badankiisu u arkaan xadhig sharci darro ah, balse maayarku ku tusayo shacabka gobolka awoodiisa uu ku meelmarin karo wuxuu rabo, isagoo baal maraya sharciga, qareen, Maayarku waxa uu ku doodaayay isaga oo qareenkiisa kor ula hadlaaya maxkamadana ka qaylinaaya in tafatiraha shabakda qarannews’na lagu rido xukun maqnaasho ah oo la xukumo, taasi oo uu xaakinkii ku gacan saydhay.
Dadweyne badan oo isugu soo baxay goobtii xukunku ka dhacayey ayaa ku dhawaaqayey kelmado ay ka mid yihiin: Gabal baas baa u dumay xoriyaddii warbaahinta,mar haddii weriyihii waxa socda wax ka sheega la xidhayo, dhalinyarada gobolkuna waxay niyad jab ka muujiyeen sida ay u yaraatay rajadii ay ka qabeen in qaarkood weriyayaaal noqdaan.
Hadda wixii ka dambeeya maayarku waa inuu weriyana noqdaa (keligii maayar,keligii weriye) ayaa wiil dhalinyaro ahi si baqdin leh u yidhi isagoo hareeraha iska eegaya. wiil kale aad u da’ yar ayaa yidhi odaygu waa Stalin-kii reer Sanaag xagga cabudhinta iyo arxandarada.
Weriye darwiish waxa lagu xidhay maqaal uu kaga warbixinayey habka loo maamulo hantida qaran ee kasoo xeroota wakaaladda horumarinta biyaha ee magaalada Ceerigaabo, kharashkaas oo jeebka maayarka iyo shaqsiyaad maayarka ku xeeran gala, waxna aanay kasoo gaadhin khasnadda xukuumadda dhexe.
Su,aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay intee in le,eg ayay weriyayaasha reer sanaag kusii jiri karaan xadhig,hanjabaad,cabudhin,iska hortaagid gudashada howl-maalmeedkooda iwm? Jawaabta suaashani waxay u taallaa shacabka gobolka iyo dacwadohooda ay u gudbiyaan xukuumadda dhexe, si loola tacaalo loogana takhaluso kelitalisnimada gobolka kasoo cusboonaatay.
Siciid Saalax, Ceerigaabo, Sanaag.